Soavaly arabo: fihaviana, toetra mampiavaka azy ary fahalianana | Soavaly Noti
Ilay soavaly arabo
Carlos Garrido | | soavaly
Eto amin'izao tontolo izao dia misy biby goavambe sy midadasika. Maro amin'izy ireo no nahaliana ny olona hatramin'ny nanombohany ny fisehoany. Toy izany ny zava-misy, fa nahavita namelona zavaboary maro an'isa izy hatramin'ny nahatongavany andraikitra lehibe amin'ny fivoaran'ny zanak'olombelona. Tsy isalasalana, amin'ireo biby rehetra ireo, ny soavaly dia manana fifandraisana manokana. Ary tao anatin'ny soavaly dia afaka nilaza isika fa ny Soavaly Arabo dia iray amin'ireo malaza indrindra.
Ity zana-kazo Equine ity dia niaritra ary nanohitra mafy ny fandehan'ny fotoana, noho ny ampahany amin'ny toetrany sy ny mampiavaka azy. Tsy mahagaga raha omena lanja lehibe ankehitriny, satria mendrika azy io.
Azo antoka fa ireo mpankafy lehibe ny tontolon'ny soavaly dia mahalala tsara ny dikan'ilay soavaly Arabo sy izay rehetra manodidina azy. Na izany aza, hisy olona maro izay tsy dia mahazatra azy loatra. Izany indrindra no anton'ity lahatsoratra ity, izay tsy misy afa-tsy ny tanjony mifankahalala ary ampahafantaro bebe kokoa momba an'io biby mahafinaritra sy tsara tarehy io ianao.
1 Tantaran'ny soavaly arabo
3 Mampiavaka ny soavaly arabo
4 Andalana soavaly arabo
5 Vidin'ny soavaly arabo
Tantaran'ny soavaly arabo
Betsaka ny tantara, finoana ary angano nipoitra sy nitombo manodidina ny sarin'ny soavaly arabo. Anisan'izy rehetra, angamba ilay mitantara ny namoronan'i Allah an'io soavaly io tamin'ny fasika sy rivotra vitsivitsy monja, izay niavaka teo ambonin'ny ambiny.
Ny azo antoka ary raikitra dia fa ny soavaly arabo dia iray amin'ireo karazany tranainy sy tranainy indrindra misy ao anatin'ny fianakaviana Equine. Taranaky ny soavaly taloha na prehistorika izy izay nonina ny steppe lava sy malalaka an'ny kaontinanta Afrikana sy Eoropeana talohan'ny nisehoan'ny olona.
Ny sombin-tsoavaly voalohany amin'ny soavaly arabo dia manondro fa io karazany io dia efa teo amintsika taloha mihoatra ny 4500 taona, hatramin'ny nahitana soavaly tavela tamin'izany fotoana izany izay misy fitoviana lehibe amin'ilay soavaly arabo ankehitriny.
Tany Moyen Orient no toerana nahaterahany ary, noho ny ampahany tamin'ny varotra sy ireo ady ady isan-karazany, dia nanaparitaka sy naka ny ambin'izao tontolo izao izy ireo. Satria nivoatra izy ireo tao anatin'ny toe-javatra sarotra izay mampiavaka ny toetr'andro tany an'efitra, dia afaka nahazo ny fepetra feno tanjaka sy fanoherana lanjan'ireo mponina sy olona maro izy ireo. Miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana, ny soavaly arabo dia niampita amina karazana maro hafa hanatsarana ny fepetra na ny fahaiza-manao.
Mampiray ny hoaviny amin'ny fotoana rehetra ho an'ny olombelona, ​​dia nahatonga ny soavaly arabo ho lasa iray amin'ireo soavaly malefaka kokoa sy mahira-tsaina noho ny ahafantarana azy ireo. Ny andraikiny lehibe dia tsy misy ifandraisany amin'ny asa fambolena, fa ny fanehoana ny fisiany eo amin'ny sahan'ady.
Soa ihany, androany dia hafa tanteraka ny anjaran'ny soavaly arabo. Miorina amin'ny laoniny ny fiompiana sy ny fikarakaran'izy ireo amin'ny fandraisana anjara amin'ny hetsika soavaly toy ny mitaingina soavaly, anisan'ny hazakazaka malaza indrindra amin'ireo fifanolanana ireo. Ny hakingany, ny hafaliany ary ny firindrany mirindra no tompon'andraikitra indrindra amin'ity toe-javatra ity.
Mampiavaka ny soavaly arabo
Araka ny efa noresahintsika tetsy aloha, ny soavaly arabo dia tsy soavaly fotsiny. Ity karazana ity dia mitazona miaraka aminy andian-toetra izay manavaka tsara azy amin'ny mpitaingina hafa.
Ny habeny, toy ny amin'ny tranga rehetra, dia miovaova arakaraka ny santionany, ny firaisana, sns. Na izany aza, ny fenitry ny fivavahana amin'ny soavaly arabo dia milaza amintsika fa ny haavon'ny maina dia eo anelanelan'ny 143 sy 153 centimetatra. Mampiseho izany fa tsy karazany lehibe, fa kely.
Ny volon'izy ireo dia mety manana alokaloka isan-karazany. Raha ny tena izy dia mahita soavaly arabo amin'ny loko rehetra isika, na dia izany aza ny mampiavaka azy indrindra na miorim-paka amin'ity karazana karazana ity dia ny lokon'ny volondavenona sy chestnut.
Rehefa mandinika ny endrik'izy io isika dia tsy maintsy manome lanja manokana ny loha. Ny lohan'ireto soavaly ireto dia voadio, miaraka amin'ny handriny tena malalaka sy maso lehibe sy maneho hevitra tokoa. Ny orona lehibe dia mifanohitra amin'ny orony kely
Ao amin'ny ampahany voalohany amin'ity lahatsoratra ity dia nilaza izahay fa rehefa nihalehibe tamin'ny tontolo masiaka sy toerana nanamarika ny fivoarany sy ny fivoarany, zavatra iray izay azo jerena ambonin'izy rehetra. ny vatany matanjaka sy matanjaka.
Ny soavaly arabo dia somary fohy ihany ny lamosiny, ary tsy dia manitatra loatra ny rihana avaratra. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra, ny santionan'ny soavaly arabo dia tsy manana hazondamosina dimy fotsiny fa tsy enina, izay mahazatra. Mahatonga ny fihenan'ny taolan-tehezana avy hatrany izany. (Taolan-tehezana 17 fa tsy 18).
Raha ny toetrany no jerena dia tsy maintsy asongadintsika fa iray amin'izany ny soavaly saro-pady sy manan-tsaina indrindra hita hatramin'izay. Ny fahamendrehany sy ny fitoniany dia namela azy io ho anisan'ny karazany ankafizin'ny mpamboly sy ny mpitia soavaly.
Andalana soavaly arabo
Nandritra ny fivoarany, ny soavaly arabo dia niampita karazan-karazany maro hanatsarana ny toetra toy ny haavo sns. Izany dia nahatonga ny tsipika soavaly arabo samy hafa nipoitra tao anatin'ny karazany iray, nitovy be tamin'ny iray hafa, nefa koa nampiseho fahasamihafana sasany.
Voalohany indrindra, manana ny karazany na karazana antsoina isika Kuhayla. Eo ambanin'io tsipika soavaly arabo io dia ireo manana endrika matanjaka sy matanjaka indrindra. Manaraka, hitantsika ny soavaly arabo antsoina Saqlauis, izay soavaly tena kanto sy tsara indrindra indrindra raha miteny. Amin'ny toerana farany dia misy ny muniqui, izay mifanitsy amin'ireo soavaly izay mety kokoa ny toetrany ary akaiky kokoa ny hafainganana sy ny hakingana.
Ireo ihany ireo andalana telo lehibe, na dia ampidirintsika aza ireo zana-tsipika sy fianakaviana samihafa manodidina azy ireo, dia mety ho roanjato no isan'izy ireo.
Vidin'ny soavaly arabo
Tsy ny biby fiompy ambany soavaly ny soavaly. Marihina fa io toe-javatra io koa dia miovaova arakaraka ny karazany sy ny lafin-javatra maro.
Ny soavaly arabo amin'ny ankapobeny dia tsy soavaly lafo vidy indrindra. Ny salanisa vidin'ny santionany madio eo anelanelan'ny 4500 sy 6000 Euros izany.
Manantena izahay fa nanampy anao hianatra bebe kokoa momba ny toetoetran'ny soavaly Arabo sy ny niaviany, ary koa ny ahafahana manaitra ny fahaliananao sy ny bibikely momba ny biby mahafinaritra toy izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Ilay soavaly arabo
Ny hazakazaka malaza indrindra eto an-tany